Scott now runsacompany called Biofase. What they do with the least-useful-seeming bio-waste that you can imagine, avocado seeds, is simply genius. They went from producing plastic resin to plastic cutlery; they recently started making plastic straws—all of it from discarded avocado pits, and all of it completely environmentally safe.
Biofase စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၈၊ နိုဝင်ဘာ ၁၊ ကြာသပတေးနေ့
Biofase စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၅၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
SBS Sinhalese စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၉၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Biofase စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၈၊ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ တနင်္ဂနွေနေ့
Biofase စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင် ၁၀၊ ကြာသပတေးနေ့
Biofase စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၉၊ မတ် ၁၃၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့